Mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo "lagu cunsuriyadeeyay" garoonka Muqdisho
Mas'uuliyiin Jubbaland ah oo "lagu cunsuriyadeeyay" garoonka Muqdisho
Maamulka Kismaayo ayaa sidoo kale wuxuu cambaareeyay is-hortaagii lagu sameeyay Sheekh Shariif.
KISMAAYO, Jubbaland - Shaqaale rayid ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay "lagu cunsuriyadeeyay" madaarka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, sida uu shaaciyey maamulkaas.
"...Shacabka reer Jubbaland-na waxay ciqaab wadareed kala kulmeen cunaqabateynta ay dowladda federaalka kusoo rogtay duulimaadyada degaanada [dowlad goboleedka]," ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Sidda laga soo xigtay bayaanka, dhinacyadda ayaa sidoo kale "lagula kacay falal guracan sida hanjabaadyo...taasoo baalmarsan shuruucda iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya".
Dhinaca kale, warka qoraalka ah ayaa waxaa lagu cambaareeyay is-hortaagii ay dowladda federaalka ku sameysay diyaaradii Sheekh Shariif Axmed u qaadi lahayd magaaladda Kismaayo, xarunta Jubadda Hoose.
Madaxweynihii 7aad ee dalka ahna hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa kamid ah martida lagu casuumay ka qeybgalka xaflada caleema saarka Axmed Madoobe oo 26-ka bishan September loo balansan yahay.
"Xanibaada iyo is-hortaaga madaxweynihii hore ee dalka waxay kasoo horjeedaa shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala, kaasi oo muwaadinka siinaya xorriyad uu meesha uu doonayo ugu safri karo," ayaa lagu yiri.
Xukuumadda Federaalka ayaa waxa aysan wali ka jawaabin dalabyo dhowr ah oo ku saabsan in ay sharaxaad ka bixiso sababta ay Shariif ugu diiday in uu u socdaalo magaaladda Kismaayo.
"Madaxda DFS ee xiligan waxay tagfri fal awoodeed u isticmaalayaan shacabka iyo siyaasiyiinta, iyaga oo maamulka hawada u adeegsanaya dano gaar ah oo siyaasadeed," ayuu xusay bayaanka.
Isaga oo difaacaya go'aanka dowladda, wasiirka Duulista federaalka ayaa joojinta duulimaadyadda tooska ah ee Kismaayo ku sababeeyay "hubinta diyaaradaha tegaya iyo in uusan Kismaayo maamul la aqoonsan yahay".
"Madaxda DFS waxaan uga digeynaa ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta iyo dastuurka...taasoo dhaawaceysa midnimada iyo wadjirka dibna u celineysa geedi u socodka dowladnimadda Soomaaliya," ayaa lagu soo xiray.
Hoos ka akhriso bayaanka
Jubaland oo shaki ka muujisay warka DF ee "baxsashada" Janan
Soomaliya 28.01.2020. 22:50
Maamulka madaxweyne Axmed Madoobe ayaa codsaday in meel lagu sheego "raq ama ruuxda wasiirka".
Maxaa ka jira in wasiir Cabdirashiid Janan loo dhoofiyey dal kale?
Soomaliya 30.01.2020. 16:00
DF Soomaaliya oo Muqdisho ku xirtay Xubno katirsan Jubaland
Soomaliya 08.02.2020. 07:00
Shan qof oo dhaawacyo culus qaba oo laga dejiyey Muqdisho
Soomaliya 04.02.2020. 13:36
Lix jirka raba in uu u aargudo Aabihii oo Al-Shabaab dishay
Soomaliya 02.12.2019. 20:07